Mayelana | Ibhulogi Elikhukhulayo Elikhulu
Sawubona futhi wamukelekile kuwebhusayithi yethu emangalisayo ye-porn! Akuyona nje indawo lapho ungasusa khona amatshe akho noma uchithe isikhathi esithile ungaphinde ubuye, cha - yindawo lapho abantu benelisa khona izifiso zabo zocansi. Indawo lapho abantu bethola khona abantu abanomqondo ofanayo, indawo lapho yonke imicabango yakho ejule kakhulu, ehlanekezelwe kakhulu iba ngokoqobo.
Iqoqo lethu le-porn elimangazayo liyaqhubeka nokukhula futhi liguquke, nsuku zonke silayisha okuthile okusha, okuthokozisayo nokuhlanekezelwe ngokujulile. Ngeke uthole noma yini engathathwa njengokukhubazeka, ukuthanjiswa noma i-vanilla eyisicaba lapha. Ngeke sibe nayo ngenye indlela. Sifuna ukuthi uhlale uthembekile ezifisweni zakho ezisonteke kakhulu, empeleni siyazihlonipha, ngoba nathi siyindlela efanayo. Sethemba ukuthi ukuthanda kwethu zonke izinto ngokweqile kuzokwenza isipiliyoni sakho sokubuka izithombe ezingcolile sihle kakhulu. Futhi manje yisikhathi esihle sokukhuluma ngazo zonke izigaba zewebhusayithi yakho entsha oyithandayo.
Okokuqala, sinamavidiyo we-scat. Akuyona inkomishi yetiye yawo wonke umuntu, kepha izinombolo zethu zibonisa ukuthi kungenye yezindawo (uma kungenjalo) ezithandwa kakhulu kuwebhusayithi yethu. Okulandelayo sine-Enemas enamavidiyo wokudlala we-enema nazo zonke ezinye izinhlobo zemidlalo yezocansi ehlanekezelwe ehlobene nezocansi. Ukudlula lapho, futhi sisingatha amavidiyo neziqeshana ezihlobene nokuFakwa / Ukufakwa Okumangazayo kanye Nemathoyizi Amakhulu / Imishini Yokuncinza. Lokho kwenzelwa abantu abakuthokozelayo ukubuka imbobo yentombazane eyake yavaleka yelula, icishe yaklebhuka phakathi. Ngakho-ke, ngamafuphi, uma ufuna ukuthola i-vertigo ngokubheka imbobo yomunye umuntu, lezi zingxenye ezimbili ezakho.
I-BDSM, kunjalo. Akukho lutho olufana nokubusa okusontekile nokuzithoba okumnandi. Sinesigaba esijwayelekile seBDSM ngeziswebhu, amaketanga nazo zonke ezinye izinto ezijabulisa uRihanna ngokuvuma kwakhe. Okulandelayo sinesigaba Sokubusa Kwabesifazane ukwanelisa zonke izifiso zakho ezihlobene nabesifazane, lungela ukubona ubuso obufana nobuso, ukukhulekelwa ngezinyawo, ukubanjwa ngamankentshane nokuningi. Ukubusa kwabesilisa abathandana nabesilisa nabesifazane noma isigaba seLezdom sigcwele amavidiyo amahle aqukethe amantombazane amabili (noma ngaphezulu) azitika ngemidlalo ethile ye-BDSM. Ukubusa Kwabesilisa noma i-maledom kumayelana nabesifazane abakuthanda kabi, cishe okunzima kakhulu futhi ngabafana abazimisele ukungabi nazinhliziyo, abanonya futhi abanolaka ngokweqile.
Uma ufuna okuthile okwedlulele ngokwengeziwe, sikufihlile. Kuthiwani ngamavidiyo amahle wokuhlanza? Amantombazane / abafana balahlekelwa ukulawula nokubamba ngekhamera, ukuhlanza omunye komunye noma ukumbozwa nge-bile phakathi nezikhathi zabo zokwenza uthando ezisontekile? Kuzwakala kukuhle, akunjalo? Futhi sinesigaba somgodi esinikezelwe kwiRape Fantasy futhi, akumangazi ngokwanele, izinombolo zethu zibonisa ukuthi le niche ethile iyathandwa izivakashi zethu zesifazane. Uma ufuna ukusakazwa okungapheli kwamavidiyo we-pissing, nathi sinakho lokho. Ezinye izigaba zifaka i-Bondage ne-Fetish, i-PVC ne-Latex ne-Fetish Okuxubile.
Uma nje ufuna ukuthi abesifazane bakho bakumangaze, sinesigaba sonke esinikezelwe kuma-shemales. Kuphela ezishisayo kakhulu t-babes ezinemizimba emangalisayo kakhulu kanye namaqhude esifazane. Uzoyithanda. Kukhona nesigaba esinikezelwe kuphela kwabesifazane abanezinwele. Akuwona ama-pussies anoboya kuphela, noma - lezi zingane zinemikhono ebabaza kakhulu kunawo wonke owake wazibona futhi asikhulumi nange-hirsute yazo, elangazelela izimbobo zangasese.
Kokuthize tamer kakhulu, sinesigaba esizinikezele ku-Foot Fetish. Yiso leso fetish esivame kakhulu umuntu angacabanga ngaso, ngakho-ke akusiso isibungu, singazitholela isigaba seTits Fetish ngalelo zinga. Isigaba se-Farts sikuvumela ukuthi ubuke amavidiyo afaka, yini enye, amantombazane nabafana abancane. Amavidiyo we-squirting anikezelwe kwi-orgasm yabesifazane ehlale iphoqa, eqhumayo. Amavidiyo we-Spit azokwenza umlomo wakho amanzi, uzodonsa ngokuphelele kulo lonke lelo khibhodi. Kukhona nezigaba ezinikezelwe iMedical Hardcore Fetish, Pumping, Teens (18+) kanye ne-Asshole Corner esedume kabi manje. Sisavulekele iziphakamiso, yikuphi okungcono - i-Asshole Corner, i-Asshole Asylum noma i-Asshole Alley? I-Alliteration iyathandeka, yamukele.
Futhi i-ace yethu esemgodini, ngomqondo ongokomfanekiso, yisigaba se-Most Extreme Stuff. Kweqise kakhulu ayinalo negama elifanele. Ukuqamba igama ngokuthile kungaba yinto engenangqondo, ngoba ayikho indlela yokukhomba umucu ojwayelekile kokuqukethwe. Konke kusendle, ezinye zezithombe ezingcolile zobulili eziyinqaba, ezisontekile, ezinobudlova owake wazibona. Ezinye zalezo zinto zikhethekile, zivela emaqoqweni angasese, ezinye zazo zithunyelwe ngabasebenzisi bethu abavumayo (okwamanje abesabekayo), kanti ezinye zazo sisanda kuzithola ku-hard drive kamama wakho. Ungesabi ukuyivula, akuyona ibhokisi elithile leLemarchand. Siyazi ukuthi uyafuna.
Ukwenza le ndaba ende ifushane, sifuna nje ukuthi ujabule kuwebhusayithi yethu. Kuyindida ngakho-ke yini, nawe uphazamiseke kakhulu. Udinga izithombe ezingcolile ezisontekile futhi sikunikeza zona. Njalo ngosuku olulodwa, iviki phakathi neviki, unyaka wonke. Uthola izibuyekezo zamahhala, amathani we-porn eyedlulele, futhi, mahhala. Ungalenzi iphutha ngakho: sifuna ukuzwa impendulo yakho, sifuna ukuthi usitshele ukuthi yimaphi amavidiyo owathandayo, isihogo, ungasitshela nokuthi usuku lwakho luhambe kanjani - asinendaba, sikwenzela wena thina ngifuna ukuzwa kuwe.
Ibhulogi Elikhukhulayo Elikhulu > Mayelana